Wafdigii labaad oo ka socda aqalka saree e Soomaaliya oo u anba baxay magaalada Kismaanyo. – The Voice of Northeastern Kenya
Wafdigii labaad oo ka socda aqalka saree e Soomaaliya oo u anba baxay magaalada Kismaanyo.
Wafdigii labaad ee ka socda Xubnaha Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya,waxayna ku sii jeedaan Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubada hoose.
Sida ay warbaahinta gudha u sheegeen masuuliyiin katirsan aqalka saree ee Soomaaliya Wafdigan ayaa Tiro ahaan waxay gaarayaan ilaa 10 xubnood , waxaana hogaaminaya Senater Axmed xaashi maxamuud oo ka tirsan aqalka sare.
Xubnaha ka socda Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa marka ay tagaan Magaalada Kismaayo, Waxaa lagu wadaa inay kulamo la qaataan masuuliyiinta ugu sareysa ee Maamulka Jubbaland.
Ujeedka safarka wafdigan ayaa waxaay qayb ka tahay sidii xal loogu heli lahaa khilaafka Siyaasadeed ee u dhexeeya Maamul gobaleedyada iyo Dowlada Dhexe ee Soomaaliya.
Shalay ayay aheyd markii Wafdigii ugu horeeyay ee ka socday Xildhibaanada Aqalka Sare ay gaaraan Magaalada Garoowe Ee Gobalka Nugaal kuwaasoo qayb ka ah qorshaha aqalka sare ee lagu dajinayo xiisadaha siyaasadeed ee Soomaaliya.
← DHAGEYSO Duqa Muqdisho oo hogaamiyeyaasha gobolada Soomaaliya ugu baaqay inay ka shaqeeyaan danaha dalkooda.
Isbitaalka Pumwani oo laga helay meydadka 12 dhallaan ah →